Dhageyso:-Daahir Geelle oo laba Arrin ku eedeeyey Madaxda Dowladda | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Daahir Geelle oo laba Arrin ku eedeeyey Madaxda Dowladda
Dhageyso:-Daahir Geelle oo laba Arrin ku eedeeyey Madaxda Dowladda
Siyaasiga Daahir Maxamuud Geelle kana mid ah musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada soo socata sidoo kalena laba jeer soo noqdey Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in Madaxda Dowladda ay isku dayayaan inay sameeyaan muddo kororsi oo waqtigeeda aysan doorash ku dhicin.
Waxa uu ku sheegay Wareysi uu siiyey Tv-ga Universal in xataa hadii ay awoodaan in 20 Sano sii joogi karaan ay jeclaan lahaayeen Madaxda Dowladda,hayeeshee dadka Soomaaliyeed iyo Saamileyda Siyaasada aysan aqbaleyn oo fahmeen in loo baahan yahay isbedel.
Madaxda Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay in uu ku yaqaano fal ceebeed oo la xiriira dhinaca doorashooyinka,hayeeshee uu sheegay in ay ka Shaqeynayan in la helo doorasho ku dhacda xor iyo xalaal.
Arrimaha ku saabsan khilaafka dhinaca Waxbarashada ee ka dhaxeeya Dowladda iyo Maamulka Puntland,waxaana uu ugu baaqay Madaxda Dowladda in cid kasta oo ku soo baxda doorahooyinka ka dhaca Maamul goboleedyada,isla markaana aysan saameyn ku yeelan Waxbarashada iyo wax kasta oo wax loogu qabanayo Bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleDaacish oo Dagaalyahano horleh kusoo Bandhigtay deegaano ka tirsan Puntland
Next articleFuritaanka Barlamaanka FS oo dib loo dhigayo iyo doorashadii oo shaki la galiyay